Mgbanwe na Onlinezụ ahịa n'ịntanetị na ndị na-ere ahịa | Martech Zone
Wenezdee, Machị 11, 2015 Douglas Karr
Enwere mgbanwe na-eme n'etiti mkpọsa na ịzụ ahịa n'ịntanetị, mana echeghị m na onye ọ bụla ghọtara n'ezie ebe anyị na-aga. Nnukwu asọmpi na mbupu n'efu na-enye ndị ahịa nnukwu ego mana ha na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ ecommerce. N'otu oge ahụ, ndị na-azụ ahịa ka hụrụ n'anya egosi na inweta aka na mmetụta ngwaahịa ndị ha na-achọ ịzụta.
Ihe mgbochi ọzọ maka ụlọ ọrụ ecommerce dị ọcha bụ ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke steeti na-etinye ụtụ isi maka ụlọ ọrụ ecommerce n'ihi nrụgide nke ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa na-etinye. (Nke a na-eme ka m riled… ụtụ isi dị mkpa iji kwado okporo ụzọ, nchekwa, ọkụ, ndị uwe ojii, wdg. Na ụlọ ahịa mkpọsa. Ọtụtụ mgbe ụlọ ọrụ ecommerce anaghị emezue iwu ha n'otu steeti).
Lọ ahịa mkpọsa nwere ike ịdị nchebe karịa ka ọtụtụ mmadụ chere, na-enye ụlọ ngosi na ebe a na-eburu ndị ahịa chọrọ ya ugbu a. Agbanyeghị, enwere obi abụọ na ahịa ịntanetị na-agbanwe ụzọ azụmaahịa si arụ ọrụ. Ndị na-ere ahịa ahịa ga-enwerịrị ọnụnọ dị n'ịntanetị dị ịtụnanya ebe ha nwere ike ịgbatị ike ha iji dochie okporo ụzọ ha na-agaghị abanye n'ụlọ ahịa ahụ.
eCommerce bụ ụlọ ahịa ahịa ọhụrụ. Anyị mepụtara ihe omuma a iji nye ndị na-ahụ maka mgbasa ozi na ịre ahịa ahịa isi nke ụlọ ọrụ ndị na-ahụ ahịa na ntanetị kachasị n'ịntanetị ihe kpatara ndị mmadụ ji azụ ahịa n'ịntanetị. Salesre ahịa gị ọ bawanyela kemgbe mgbanwe na ịzụ ahịa n'ịntanetị? Ma ọ bụ ikekwe ị hụla ire ahịa. Ọ bụrụ na ị nọ n'ahịa mkpọsa ma ọ bụ na-enye ọrụ nwere ike zụta n'ịntanetị, ihe ọmụma a bụ maka gị. Peter Koeppel
Ihe omuma nke di n’okpuru na-egosi onu ogugu nke ndi na-ere ahia na-emechi emechi ka oghere di. Lọ ahịa na-ere ahịa na-agbanwe site na shelf na-adọkpụ gaa ụlọ ngosi ebe a ga-ebuli ahịa na ndị ahịa ahịa. N'uche m, ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ahịa mkpọsa ma ọ bụ saịtị ecommerce - mana ọbụghị ha abụọ - ị nwere ike ịga maka oge siri ike.
Koeppel Direct bụ ụlọ ọrụ nzaghachi ọtụtụ ọwa nwere ọtụtụ ahụmịhe na-ejikwa ụfọdụ usoro ọfụma ọfụma na-eduga na telivishọn.
Tags: ecommerceusoro ecommercekoeppel kpọmkwempeter koeppelretailere ahịa